“Manchester United wey ku qaldantay heshiis kordhinta David de Gea” – Jose Mourinho – Gool FM
“Manchester United wey ku qaldantay heshiis kordhinta David de Gea” – Jose Mourinho
Dajiye July 20, 2020
(London) 20 Luulyo 2020. Tababaraha kooxda Tottenham ee Jose Mourinho ayaa xaqiijiyay in goolhayaha Manchester United David de Gea uu nasiib ku lahaa qandaraas kordhinta uu u sameeyay Red Devils, si uu waqti dheer ula sii joogo kooxda isagoo qaadanaya lacago badan, inkastoo uu hoos u dhacay.
Manchester United ayaa ku dhawaaqday inay qandaraaska u kordhisay David de Gea bilowgii xilli ciyaareedkii hore, waxayna u ogolaatay inay mushaar ahaan u siiso 11 million euros, si uu u noqdo goolhaayaha ugu mushaarka badan Premier League, iyo xiddigaha ugu mushaarka badan guud ahaan horyaalka.
De Gea wuxuu ka mid ahaa goolhayeyaasha adduunka ugu wanaagsan mudada 10-kii sano ee la soo dhaafay, laakiin qaab ciyaareedkiisa aad ayuu hoos ugu dhacay xilli ciyaareedkii la soo dhaafay.
Haddaba macalinkii hore kooxda Manchester United ee Jose Mourinho ayaa aaminsan in Red Devils inay ku guuldarreysatay qandaraas kordhintii iyo mushaar kordhinta ay u sameysay David de Gea, wuxuuna ku tilmaamay goolhaayaha reer Spain inuu yahay mid nasiib badan.
Wargeyska “Marca” ee dalka Spain ayaa wuxuu shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Jose Mourinho, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Waa goolhaye aad u wanaagsan, laakiin wuxuu nasiib ku lahaa inuu saxiixo heshiiskiisii ugu dambeeyay”.
“Waxaan u maleynayaa in markii uu saxiixayey qandaraaskiisa weynaa inaysan aheyn wax sax ah ee ka dhigaya Manchester United in ay bixiso lacag badan si ay u sii heysato, sanad ama labo sano ka hor, adduunka oo dhan ayaa daba socon jiray, balse hadda albaabada oo dhan wey ka xiran yihiin isaga”.
Kooxaha u soo baxay UCL, kuwa Europa League aadaya, abaal-marinnada shaqsiyadeed & Wax waliba oo aad uga baahan tahay horyaalka La Liga ee xalay la soo gabagabeeyey
Ansu Fati oo ceebeystay dhammaan Weeraryahannada kooxda Real Madrid marka laga reebo Karim Benzema